I-Tizen ekubukeni okulandelayo kwe-Huawei? | Izindaba zamagajethi
I-Tizen ekubukeni okulandelayo kwe-Huawei?
Iqiniso ukuthi kulo nyaka asinazo izindaba zamawashi abaluleke kakhulu noma avelele aletha uhlelo lokusebenza lwe-Android Wear. Kusobala ukuthi imakethe yokugqokwa ingama kancane namhlanje mayelana nezindaba futhi ngukuthi banakho konke njengoba besho. Kepha namhlanje kube namahemuhemu angajwayelekile Uhlelo lokusebenza lweHuawei olugqokekayo nolweTizen, bobabili bangabonakala ndawonye esizukulwaneni esisha samadivayisi agqokekayo. Kuyinto exakile uma sicabanga ngokungakhathali kepha asikwazi ukukukhipha lokhu kungenzeka uma kubhekwa ukuthi iTizen isebenza kahle kakhulu kumaSamsung Gears.
Kubukeka sengathi i-Android Wear ayikho ngesikhathi sayo esihle futhi lokhu akuyona into entsha, kepha ukuthi inkampani esezingeni eliphakeme yeHuawei inenhloso yokufaka ukufakwa kweTizen emawashini ayo amasha kubonakala ngathi okuthile okushiwo. Ngakolunye uhlangothi, njengoba kungamahemuhemu futhi akukho okusemthethweni ngempela Singacabanga ukuthi bazoba nemodeli neTizen nenye ene-software yakwaGoogle, kepha lolu ngolunye udaba ngoba amasistimu ahlukene ezinhlotsheni ezimbili amele umsebenzi omningi kunokujwayelekile ngokuya ngokwazo nokunye.
Noma kungaba njani, kumele sikubeke kucace ukuthi lena ngamahemuhemu futhi akumele sinamathele kulabo abaputshukile ngoba akekho noyedwa kulaba ababili abathintekayo oziqinisekisile noma oziphikile lezi zindaba, kusobala ukuthi uma kungekho lutho olusemthethweni, asikwazi ukusho ukuthi lokhu kuzogcwaliseka empeleni bekungeke kucatshangwe kangako.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » SmartWatch » I-Tizen ekubukeni okulandelayo kwe-Huawei?
Uxolo kodwa zibukeka njengamawashi ingubo ephezulu, Zincane ngaphandle kokuba zinkulu zisebenzisa isandla esivela kuBarbi ukukhombisa ukuthi zibukeka zimbi kakhulu
Amakhulu abasebenzisi abhubhisa i-iPhone 7 yabo ngenxa yevidiyo engamanga
IMoscow izoyeka ukusebenzisa isoftware yeMicrosoft